Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelomoya ezisuka eMilan ziya eRovaniemi kwi-easyJet ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba zaseFinland eziQhekezayo • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • umculo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseSwitzerland eziQhekezayo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Iinqwelomoya ezisuka eMilan ziya eRovaniemi kwi-easyJet ngoku.
I-easyJet ibhengeze iinqwelomoya ezisuka ngqo kwisikhululo seenqwelomoya iMalpensa eMilan Italy ukuya eRovaniemi eLapland yaseFinnish ngoDisemba 2021 nangoJanuwari 2022.
Ukufunyanwa kwakhona kokhenketho eLapland kuya kuxhamla kwiindlela ezintsha ze-easyJet zamazwe ngamazwe.
I-Itali yimarike ebalulekileyo yexesha leKrisimesi yaseLapland.
Kwangoko, i-easyJet yazisa indlela esuka eLondon Gatwick ukuya eRovaniemi ngo-2018.
Inqwelomoya yexabiso eliphantsi yaseSwitzerland i-easyJet ibhengeze iinqwelomoya ezimbini ngeveki (ngoLwesithathu, ngeCawa) ukusuka eMilan, eItali ukuya eRovaniemi, eFinland, ukuqala nge-19 kaDisemba 2021. Indlela yasebusika iya kubonelela ngeenqwelo moya kude kube nge-9 kaJanuwari 2022.
Ngaphambili, elulaJet uqalise indlela esuka eLondon Gatwick ukuya URovaniemi kwi 2018.
“Siyavuya ngenene ngale ndlela intsha yaziswe ngayo elulaJet. Olu qhagamshelo lutsha luvulelwe imeko yemfuno ephezulu, indlela enika umdla ngayo iRovaniemi kunye neLapland njengeendawo zobusika zomlingo. I-Itali yintengiso ebalulekileyo yexesha lethu leKrisimesi, utshilo uSanna Kärkkäinen uMlawuli oLawulayo Tyelela eRovaniemi.
Ukufunyanwa kwakhona kokhenketho eLapland kuya kuxhamla kwezi ndlela zisanda kuvulwa, iKärkkäinen ishwankathela.
Ndwendwela iRovaniemi ngaphambili yabhengeza indlela entsha yenqwelomoya evulwa yiAir France, ebandakanya iinqwelomoya ezimbini ngeveki eziqala kwi-4.th kaDisemba 2021, inikezela ngenqwelomoya ukuya kuthi ga nge-5th kaMatshi 2022.
IRovaniemi likomkhulu laseLapland, kumantla eFinland. Isixeko saziwa ngokuba yidolophu "esemthethweni" yaseSanta Claus, kunye nokujonga izibane zaseMantla.
EasyJet plc, eyenziwe njenge elulaJet, liqela laseBritani lamaxabiso aphantsi lenqwelo moya ephuma kwisikhululo seenqwelomoya saseLondon iLuton. Isebenza ngeenkonzo ezicwangcisiweyo zasekhaya nezamazwe ngamazwe kwiindlela ezingaphezu kwe-1,000 kumazwe angaphezu kwama-30 ngeenqwelo-moya ezidibeneyo i-EasyJet UK, i-EasyJet Switzerland, kunye ne-EasyJet yaseYurophu.